Chencan GM3560T Big Size 5 Sekaiichi richigadzirisa CNC Router Process Centre - China Shandong Chenan Machinery
Chencan GM3560T Big Size 5 Sekaiichi richigadzirisa CNC Router Process Center
GM3560T ndiye Chencan kuzvidzora dzakabudirira 5 xis machine centre, pamwe chokurukisa simba, hombe vanoshanda saizi, kutsanya kumhanya, mukuru nemazvo uye vachasimudza nguva refu.
1. Tevedzera kombiyuta-Ichibatsirwa zvakagadzirwa kuti vabudirire muchina wacho optimum STRUCTURAL kugadzira. By chinjwa gantry uye yakamisirwa tafura muoti, muchina yose welded pamwe anowedzera simbi mamiriro. Kusimbisa mbabvu vari welded mukati. pezvakaitwa Vakawanda kunetseka zvokuyamura kurapwa kuvandudza zvikuru yose muchina wacho Rigidity uye kupatsanurwa nemupristi tembiricha tempering kurapwa kuitira kuti kudzikama wakanaka, kwete nyore kuti akaremara;
2. Z akabatana nawo pamatunhu nemazvo TBI mukuru nemazvo bhora sikuruwa uye Z uye chokurukisa mari yose bwendefa shandisa inorema magadzirirwo kubvumira yakakwirira rakarurama uye kutsiga kana basa rakaoma zvinhu;
3. Guide njanji uye pani zvakafukidzirwa mukati guruva uchapupu. Guruva uchapupu magadzirirwo Muchavachengeta yakachena;
4. Z akabatana vanoshandisa hunyambiri senitrogen nepakati humburumbira design, izvo zvinobudirira kunoderedza injini yacho vachizvitakudza simba uye kuwedzera muchina upenyu basa. No vanoda kushandisa mhepo nevezera muchina;
5.Switzerland Num 5 akabatana kudzora maitiro pamwe USB nokwauri uye hwindo kudzora gadziriro kuti nokushanda zvikuru nyore uye kudzorwa cabinet pamwe USA kupisa Exchange hurongwa;
6. T slots akakandira simbi basa tafura, neurongwa yakakwirira tempering kurapwa kwete nyore kuti akaremara. The Max urefu rimwe tafura chidimbu ndiye 2m kuti aenderane mugaba;
7. Mamwe magadzirirwo handingadariki zvikamu tinoshandisa pamusoro muchiso, zvakadai sokugadzira motokari Oil hurongwa, motokari mafuta mhute hurongwa, motokari chokurukisa inotonhorera hurongwa pamwe chiller, Germany Igus waya, rokudzivirira mberi & weshure ... zvakagadzirwa All inonzi muchina yose nezvakanakisisa waivako;
• chokurukisa: Italy 24Kw chokurukisa (A ± 120 °, C ± 360 °) yose yakatarwa 5 akabatana tenderera musoro;
• chokurukisa kumhanya: 24000rpm / m;
• Table: Kandai tafura simbi;
• Switzerland Num servo Motor uye nemotokari hurongwa;
• Switzerland Num 5 akabatana kudzora maitiro pamwe chaiko 5 akabatana basa;
• xy akabatana: Zvinhu helical pani uye pinion hutachiwana ;;
• Z akabatana: Taiwan TBI yepamusoro zvakarurama bhora sikuruu;
• xyz: Taiwan HIWIN 6 chechetere mativi njanji;
• magazini Danho: Linear mhando mudziyo magazini pamwe 8 turusi pedhi;
• Automatic lubrication hurongwa;
• Automatic mafuta mhute hurongwa;
• Nitrogen pneumatic hurongwa;
• Other nemagetsi zvinoriumba vanoshandisa Schneider kana Siemens;
1. Die indasitiri: Chero chivezwa pamusoro aruminiyamu, furo, mapurasitiki, PVC, huni, Washington City Offices nevamwe esimbi munyoro-zvinhu;
2. Mould indasitiri: Chero mhando motokari muforoma, chikepe muforoma, foundry muforoma, avhiyesheni muforoma, dia chakuvhuvhu, etc;
3. Plate kugadzira indasitiri: kuputira, aruminiyamu, mapurasitiki uye namakemikari, ari pcb, kufambisa motokari muviri, vachikotama, njanji, nyeredzi Anti-anokosha puranga, epoxy, nebwe, ABS, PP, Pe, uye mamwe kabhoni masanganiswa;
Chencan GM3060T Big Size 5 Sekaiichi Mould Processing ...